Ikhaya elisha eliwubukhazikhazi e-peninsula- lilala 10 - I-Airbnb
Ikhaya elisha eliwubukhazikhazi e-peninsula- lilala 10
Millsboro, Delaware, i-United States
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Jessica
Uyemukelwa endaweni yokudlala igalofu yePeninsula kanye neklabhu yezwe! Lapha uzojabulela izinsiza ezisezingeni lomhlaba futhi ujabulele okuhlangenwe nakho kwenkundla yegalofu esayinwe uJack Nicklaus enakekelwa kahle eduze kwaseMarina Bay!
Jabulela ukuhlala kwakho endlini yemodeli yaseJefferson entsha engalala ngokunethezeka okungu-10. Lapha uzojabulela uhlelo lwesitezi oluhlotshiswe kahle futhi oluhle lokujabulisa izivakashi futhi wenze izinkumbulo Ezihlala njalo.
Leli gumbi lokulala eliphindwe kabili kanye ne-loft lihlanganisa nekhishi le-gourmet nokunye okuningi!
Leli khaya lakhiwe futhi litholakala eMarina Bay kanye neklabhu yezwe.
Le double master One esitezi ngasinye ihlomele futhi ukusingatha izivakashi ezingu-10+.
Indawo yokungcebeleka inazo zonke izidingo zakho nokunye. Kuhlanganisa i-wave pool enhle futhi eklanywe kahle enobhishi lwesihlabathi ezindaweni. Lokhu kuklanyelwe ukujabulisa abantu abadala abancane kanye nezingane ezinemindeni. Eceleni kwayo kune-putt-putt course kanye nenkundla yokudlala.
Indawo yokungcebeleka nayo inedamu labadala kuphela elineJacuzzi enkulu yangaphandle. Ngaphakathi kwendawo yokungcebeleka uzothola ichibi elishisayo ne-Jacuzzi kanye eduze nendawo yokuzivocavoca ehlome ngokuphelele esanda kulungiswa futhi kufakwe namabhayisikili e-peloton.
Ngaphezu kwenkundla yegalofu eklanywe nguJack Nicklaus uzophinde athole izinkundla zethenisi ezimbalwa, izinkundla zebasketball kanye nemizila yemvelo yangaphandle azoyihlola.
I-clubhouse iklanywe kahle futhi inezinkanyezi ezinhlanu zokudla okumnandi kwekhwalithi yabapheki. Kuhlanganisa negceke elikhulu langaphandle elinesitezi esiphindwe kabili lapho uzothola khona umgodi omkhulu womlilo wegesi ongaphandle ukuze ujabulele i-cocktail noma isiphuzo osithandayo ngebha. Iphinde ibe nebhola le-bocce eliseduze, i-cornhole kanye nendawo yokubeka eluhlaza kanye nendawo yokusika. (Yonke le imidlalo ingasetshenziswa mahhala -okuhlanganisa ukuchopha nokubeka inkambo).
Sicela ubuyekeze lonke ulwazi njengoba ezinye izinsiza zidinga izinkokhelo ngokusekelwe kusizini ohlala kuyo.
Uma kwenzeka unquma ukuqoqa ukudla nezinto zangasese endleleni yakho futhi kunendawo eseduze yase-Harris Teeter, ukudla okuyimidondoshiya, ama-Dunkin' donuts nezinye izitolo ezimbalwa nezitolo zegrosa endaweni eqhele ngamakhilomitha amaningi ukusuka endaweni yokungcebeleka.
Sithemba ukuthi uzokujabulela ukuhlala kwakho!
Sitholakala ngendlela ongathanda ukuba sibe yiyo futhi sizohlinzeka ngezinombolo zethu zocingo ukuze usithinte uma kudingeka nganoma yiziphi izinkinga noma izimo eziphuthumayo. Futhi sizoxhumana ngombhalo noma i-imeyili uma uthanda.
Hlola ezinye izinketho ezise- Millsboro namaphethelo